Lafrantsa : Tsy miantoka vola maloto -
AccueilRaharaham-pirenenaLafrantsa : Tsy miantoka vola maloto
10/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nogiazan’ny PNF na « Parquet National Financier » any Frantsa ireo fananam-ben’i Mamy Ravatomanga ao Levallois Perret ny faha-25 sy 27 Jona lasa teo. Mifono hafatra goavana ho an’i Andry Rajoelina sy ny forongony anefa izany…
Ny volana desambra 2013 no nitsangana tany Frantsa ny rafi-pitsarana ara-bola PNF, taorian’ny raharaha Cahuzac, mba hanamorana ny fikarohana sy ny fanadihadiana manodidina ireo heloka be vava ara-bola avo lenta ao Frantsa, tafiditra tao anatin’izany ny raharaha naha voarohirohy ny praiminisitra frantsay teo aloha, François Fillon, Teodoro Obiang filoha lefitr’i “Guinée équatoriale” izay nahazo sazy mihantona telo taona an-tranomaizina miampy fandoavana lamandy mitentina 30 Tapitrisa « Euros », ny Panama Papers, sns. Tsy te hiantoka ireo vola maloto tafiditra ao Frantsa intsony ny vahoaka frantsay sy ny governemanta.
Ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena frantsay farany teo mihitsy no nanokafan’ny PNF fanadihadiana mikasika ny praiminisitra teo aloha François Fillon, izay no heverina fa ho isan’ireo matanjaka tamin’ireo kandidà. Izany hoe, tsy mifidy na iza na iza manoloana ny ady amin’ny famotsiam-bola maloto ao aminy ity rafi-pitsarana ity, eny hatramin’ny manam-pahefana sy mpitondra frantsay.
Tsy afaka hanao mizana tsindrian’ila eo anatrehan’ny vahoaka frantsay ny PNF, hanenjika sy hampiditra am-ponja minisitra na praiminisitra frantsay teo aloha kanefa hitazam-potsiny manoloana ireo vahiny mampiasa ny vola malotony ao amin’ny faritr’i Lafrantsa tahaka an’i Mamy Ravatomanga, izay tsy iza akory fa mpamatsy vola ny MAPAR sy ny Andry Rajoelina. Manara-maso tanteraka ity raharaha nanokafan’ny “brigade financière” tao Nanterre fanadihadiana araka ny baikon’ny Fampanoavana tao Parisy ity tokoa ny vahoaka frantsay ary izany no antony namoahan’ny “L’Express” frantsay ity raharaha Mamy Ravatomanga ity an-gazety. Lojika tanteraka izany fihetsiky ny vahoaka frantsay izany, ny zanaky ny fireneny aza ve enjehin’ny PNF mainka va vahiny mitondra vola maloto ao amin’ny taniny!
Nandritra ny fitondrana Sarkozy no nividianan’ity mpamatsy vola ny MAPAR sy Andry Rajoelina ireo trano be tany Frantsa. Azo heverina fa nisy fankatoavana an-kolaka na mivantana avy amin’ity filoham-pirenena frantsay teo aloha izany ary an-jatony tapitrisa “Euros” no resaka eto. Fa naninona àry no tsy tao Neuilly, naha ben’ny tanàna an’i Nicolas Sarkozy no nametrahan’i Mamy Ravatomanga ny vola malotony? Mety efa azon’ity filoha frantsay teo aloha ity an-tsaina angamba fa tsy maintsy hipoaka ny raharaha satria tsy hamela fotsiny izany famotsiam-bola izany velively ny PNF ka dia tany an-toeran-kafa no nasaina nividy trano i Mamy Ravatomanga? Efa fantatra mantsy ankehitriny ny fisian’izany mpanolotsaina ara-toekarena niasa teto Madagasikara nandritra ny Tetezamita izany nampifandray tendro ny fitondrana frantsay tamin’izany fotoana tamin’i Mamy Ravatomanga, nahafahany nividy ireo trano be mijoalajoala ao Frantsa, nanokafan’ny “Parquet National Financier” fanadihadiana sy nogiazany tao Levallois Perret ireo.
Ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara ary manoloana sampanan-dalana goavana tokoa. Mifono hafatra goavana ho an’i Andry Rajoelina sy ny forongony iny figiazana ny fananan’i Mamy Ravatomanga tao Levallois Perret iny. Tsy miantoka ny vola maloto azo nandritra ny Tetezamita ny governemanta frantsay. Izay no dikany matoa nataon’ny Fampanoavana araka izany haingana tokoa ny fanatanterahana ny paikady rehetra manodidina ity raharaha Ravatomanga ity. Etazonia rahateo efa mazava hatrany amin’ny fotoanan’ny Tetezamita fa tsy afaka ny hiara-hiasa amin’izany Andry Rajoelina, “putschiste” izany velively.
AFP, RFI, Le Monde, France 24, TV5 Monde, Le Parisien, sns. Tsy misy resaka afa-tsy ny aretina pesta sy ny tsy fandriam-pahalemana ny vaovao avoakan’ireo hainoamanjery vahiny, indrindra ny hainoamanjery frantsay, raha vao miresaka momba ...Tohiny